Booliis qaawan oo qof dambiile ah xidhay | Hangool News
Booliis qaawan oo qof dambiile ah xidhay
April 2, 2019 - Written by Hangool News 1
“Meelkaste waan joognaa. Haddii aadan na arkinna, waan kula joognaa,” ayaa lagu sii daray qoraalkaas booliiska.
“In aad tallaabo qaaddo waxay sahlan tahay marka ay saaxiibbadaa ku weheliyaan, ee qalabkaaguna kuu dhamaystiran yahay, balse askarin wuxuu shaqada qabtay isagoo aan dhar qabin oo ugu talagalay in uu dhidid iska keeno,” ayuu yiri Christoffer Bohman oo ah taliye ku xigeenka booliiska Rinkeby.
“Arrinta layaabka leh waxay tahay in labadooduba ay is garteen iyaga oo ku dhex jira qolka la isku kululeeyo ee afka qalaad lagu dhaho sauna” ayaa laga soo xigtay in uu yiri taliye ku xigeenka.
Ninka masuulka ka ah xarunta dhididka la isaga keeno ayaa wargeyska Aftonbladet ee maalin walba ka soo baxa Sweden u sheegay “markii askarigu arkay ninka dambiilaha ah wuxuu dadkii qolka gudahiisa ku jiray ku wargaliyay in cidina aysan ka bixin kuwo hor lehna aysan gali karin, ka dibna ciidammo xoojin ah ayuu dalbaday”.